घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू निकोलस ओटमन्डे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल रक्षात्मक प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा ज्ञात गर्दछ; 'सामान्य'। हाम्रो निकोलस Otamendi बचपन स्टोरी प्लस जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध जीवन र उहाँका बारे धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, हरेकले उनीहरूको रक्षात्मक क्षमताहरूबारे जान्दछन् तर केही कमलहरू निकोलस ओटामान्डे जीवनीको बारेमा विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
निकोलस हर्नन गोंजोलो ओटामान्डे अर्जेन्टिना, ब्यूनस आयर्समा, 12 को 1988th दिनको जन्म भएको थियो। उहाँ जन्मेको एक्वेरिया हुनुहुन्छ। उनी अर्जेण्टीना आमाबाबु श्री र श्रीमती हिरन ओटामान्डीमा जन्मिए।
अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्सका एक सानो सहर, अल टालारमा हुर्केको निकोलस। उनी बच्चाको रूपमा बहु-प्रतिभाशाली थिए। वास्तवमा, ओटिन्डीले आफ्नो समय फुटबल र बक्सिंगको बीचमा आफ्नो युवालाई विभाजित गर्यो। बढ्दै गयो, उनले आफ्नो समय बाकस र फुटबलको बीचमा साझेदारी गरे, स्थानीय जिममा आफ्नो बल निर्माण गरिन् आफ्नो पहिरोले आफ्नो सबै ऊर्जालाई फुटबलको सुन्दर खेलमा समर्पित गर्ने निर्णय गर्नु अघि।
निकोलसले आफ्नो स्थानीय अर्जेण्टिना क्लब, वेलेज सार्सफील्डमा फुटबलको जीवन सुरु गरे। उहाँले 12 वर्ष युवा र वरिष्ठ टोलीहरूमा आफ्नो रङ पहने। त्यसपछि पछाडि, उनी आफ्नो बचपनको घरमा स्पष्ट रूपमा आरामदायक थिए। पहिलो टोलीमा नियमित स्थानमा सिमेन्ट गर्दा पनि निकोलस अझै पनि आफ्नो बुबा र मामको साथ घरमै बस्न थाले।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
दक्षिण अफ्रिकामा 2010 विश्व कपमा एक प्रभावशाली प्रदर्शन पछि, त्यो उस वर्षको अगस्टमा पोर्टो द्वारा छाडिएको थियो। एक सफल दुई मौसम पछि, यूरोपा लीग र पोर्चुगल ट्राफिकहरू जितेपछि, वलसेनियाले ओटामान्डको लागि € 12m भुक्तानी गर्यो। स्पेनिस क्लबले चेल्सी, बार्सिलोना र एसी मिलानलाई रुचाइयो। म्यान सिटीले एक मौका देखाए जब ओटामान्ड्स एकपटक एकपटक प्रशिक्षित गर्न वा वाल्सेनियासँग खेल्न इन्कार गरे। तिनीहरूले यसलाई ट्याप गरे र पाउन्ड 28.5 मिलियन को लागि जनरल मा हस्ताक्षर गरे। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
निकोलस ओटामान्डेले आफ्नो अर्जेण्टिना बचपन प्रियलाई विवाह गरेको छ। तिनी एक पटक आफ्नी श्रीमती संग शहरको केन्द्रमा रेस्टुराउन लागे।
उनी तल फोटोमा धेरै खुसी देखिन्छन। सम्भवतः पेप Guardiola उनलाई एक महत्त्वपूर्ण खेलमा छोडियो।
दुवै युगल एक प्यारा छोरा छ जो धेरै आफ्नो लगत्तै जस्तो देखिन्छ।
निकोलस ओटामान्डा पनि अन्य बच्चाहरु जसको विवरण व्यक्तिगत राखिएको छ।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सैन्य शैली
Otamendi को उपनामहरु मध्ये एक जनरल हो, उनको लक्ष्य समारोह को लागि एक श्रद्धांजलि हो जसमा उनले प्रशंसकहरुलाई सलाम गर्दछ।
निकोलस ओटामान्डको उपनाम तथ्य
उहाँ एल मोबिकनो पनि जान्नुहुन्छ। यो उपनाम आफ्नो दाढ़ी संग सम्बन्धित छ।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -दाँत
निकोलस अहिले दाहालको युद्धमा शीर्षमा रहेको छ। अर्जेण्टीनाले एक पटक स्वीकार गर्यो कि उनको दाढ़ीले आफ्नो आक्रामक, कठिन-मान्छेको छविमा योगदान दिन मद्दत गर्दछ।
उनीहरूले गल्ती गरेनन्, यो धेरै समय र प्रयास स्पष्ट छ र उनको अनुहारको कपाल को आकार दिन्छन्, जो समकालीन कपाल संग मिलिएको छ, उसलाई ठाउँ बाट बाहिर छोड्ने छैन।
निकोलस ओटिम्मेदी- राजाको दार्जी
उनको शब्दहरुमा ..'मैले दाँत वेलिसियामा बृद्धि गर्न थालेँ र मैले यसलाई मनपर्यो, त्यसो भए पछि यो मेरो व्यक्तित्वको ठूलो भाग बनिरहेको छ। "
वास्तवमा, ओटान्डेरीको दाखिला जो उनको अचम्म लाग्दो देखिन्छ उनको क्यारियरमा धेरै सफल टेकल्स भएको छ। सफल टेकलको एउटा उदाहरण तल देखाइएको छ।
जब उनको दाढ़ीले जित्छ उसलाई जित्छ
दाढ़ी म्याच विजेता परिदृश्यको एक उदाहरण तल देखाइएको छ;
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -टैटू
निकोलस ओटामान्ड टैटू तथ्य
ओटिम्नीले आफ्नो पहिलो ट्याट्टको थियो जब उनी 14 थिए। आज, उहाँसँग धेरै छ, प्रत्येकको यसको महत्व छ। तिनका शब्दहरूमा "मेरो भाइ र मीy kids, my father, my mother, and finally, my grandfather को अनुहार मेरो शरीर मा मसीह मा छ. सम्म dखाए, यदि म seईआइ डिजाइन जसले मेरो आँखालाई समात्न सक्छ, म यसको लागि जानेछु। "
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -अर्जेण्टीना फैक्टर
ओटामान्डेले मैनचेस्टर सिटी टोलीको अतिरिक्तले सिटी अर्जेन्टिनाको सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको रूपमा अर्जेंटीनालाई समेट्यो।
केन्द्र-पछाडि छैटौं अर्जेन्टीना बन्छ जसले आफ्नो स्थान इतिहाद ड्रेसिंग रूममा लिन्छ। उहाँले एक पटक प्रकट गर्नुभयो कि उनको सहयोगी अभिनेत्री सर्जियो अगुरोले मैनचेस्टरको लागि वेल्सेन्स स्वैप गर्न आफ्नो निर्णयमा प्रमुख कारकहरूमध्ये एक थिए। उनले यस्तो लेखे: "मैले एक निश्चित कोपा अमेरिकाको समयमा एगुइरोसँग बोलेको समयको कारण, सिटीको रुचि सधैं आकर्षक आकर्षक थियो।"
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -जन्मदिन साथीहरू
Otamendi अतीत को केहि शानदार आंकडे, संग चार्ल्स डार्विन र अब्राहम लिंकन सहित आफ्नो जन्मदिन साझा। हालैमा, अभिनेता जेसी स्पेंसर र जोश ब्रोले पनि आफ्नो मोमबत्तीहरू पनि निकोलसको रूपमा उही दिन उछिन्।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -रेकर्ड स्पोलर
Otamendi एक संदेह बिना छ, एक रेकर्ड भ्रामक। एक पल्ट एक पल्ट, रियल म्याड्रिड आफ्नो आफ्नै रेकर्ड को आनंद ले रहे थियो, जो 22 मा खडा एक पंक्ति मा जीत, जब तक ला लीगा दिग्गज जनरल, निकोलस ओटामान्डी विरुद्ध आउँदैन। थियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर खोलियो, तर भ्यालेन्सियालाई बराबर तुल्याउन दृढ बनाइयो, र लामो समय पछि हाल्टिमेट गरेपछि 6ft जनरल लेप्पर हावामा हावा हावा हालेर घरको हेडर गोल गर्न थालेको थियो।
यसले अन्त्यमा रियल म्याड्रिडको गर्व विजेता रन ल्याएको छ जसले चार महिनासम्म चलेको थियो।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
निकोलस ओटामान्डेले आफ्ना पिताद्वारा संचालित मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। फुटबल लगानीको भुक्तानीको रूपमा उनीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमिको स्थिति बढ्यो।
उनको दुवै आमाबाबु श्री र श्रीमती हिरन ओटामान्डी अर्जेण्टीना राजधानी, ब्यूनस आयर्स मा बस्छन। निकोलस ओटामान्डी उनको मातृको नजिक हुनु भएको छ।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उनको आइडल
निकोलस ओटाम्यान्डको मूर्ति कुनै भन्दा बढी व्यक्ति होइन रोबर्टो Ayala.
जब Otamendiले 2010 मा अर्जेंटीनाको विश्व कप टोली बनायो, उनले पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसँग तुलना गर्न गाह्रो गरे रोबर्टो Ayala, जसले ला अल्बेलेले को लागि एक शताब्दी देखि अधिक उपस्थित बनायो। पौराणिक डिफेंडर (Ayala) 2000 र 2007 बीच वैलिसियामा सात वर्ष बिताईयो। 2014 मा क्लब मा सामेल गर्न आफ्नो जवान चेला (निकोलस ओटामान्डी) लाई राजी गर्न मद्दत गर्ने थियो।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्पीडन म्यान
सामान्यले सम्पीडन जूताहरू प्रयोग गर्न मनपर्छ आफ्नो फार्म र पुनःप्राप्त तनाव र चोटबाट बढाउन।
यी जूताहरू पछि कसरत बढावाको लागि एथलीटहरू र उनीहरूको रगत परिसंचरण बढाउनको लागि डिजाइन गरिएको छ।
Nicolas Otamendi Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
निकोलस ओटामान्ड जन्म को एक्वेरियस हो। उहाँसँग आफ्नो व्यक्तित्वसँग जोडिएको विशेषता विशेषता छ।
निकोलस ओटाम्डेन्डको शक्ति: उहाँ प्रगतिशील, मूल, स्वतन्त्र र मानवअधिकार हुनुहुन्छ।
निकोलस ओटाम्ण्डेको कमजोरीहरू: भावनात्मक अभिव्यक्ति, स्वभाविक, असंगत र अनुहारबाट चलाउँछ।
के निकोलस ओटामान्डलाई मनपर्छ: साथीहरूसँग रमाइलो, अरूलाई मद्दत गर्न, कारणहरूका लागि लड्न, बौद्धिक कुराकानी, सुन्ने सुने
निकोलस ओटामान्डले नमनपराउने: सीमाहरू, भाटा प्रतिज्ञाहरू, अकेला, सुस्त वा उखान गर्ने अवस्थाहरू, तिनीहरूसँग असहमत गर्ने मानिसहरू
हाम्रो निकोलस ओटामान्डको बचपन स्टोरी प्लस अनगिन्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!